(L) အစားအစာကစွဲလမ်းနိုင်သလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒေါက်တာ Nora Volkow၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာ (၂၀၁၂) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn On
(L) ကိုစားနပ်ရိက္ခာတကယ်ပဲစှဲ Be နိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာနိုရာ Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု (2012) ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး Says
မှတ်ချက်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာ Dr. Nora Volkow ကအစားအစာစွဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကဲ့သို့တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြိမ်များစွာတွေ့ခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းထက်အနည်ကျသောအစားအစာများကိုပိုမိုသွေးဆောင်နိုင်သည့်အချက်ကိုသူမကထောက်ပြသည်။ အများအပြား
TIME မဂ္ဂဇင်း: စားနပ်ရိက္ခာအမှန်တကယ်ကိုစှဲ Be နိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့, အမျိုးသားဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ Says
အမေရိကရှိအဝလွန်သူများ၏အချိုးအစားကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာ Dr. Nora Volkow ကအစားအစာသည်ကိုကင်းအက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့စွဲလမ်းမှုမရှိဟုငြင်းခုံရန်ကြိုးစားသည်
Maia Szalavitz by | @maiasz | ဧပြီလ 5, 2012 |
အစားအစာကိုတကယ်မူးယစ်ဆေးသကဲ့သို့စွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Rockefeller တက္ကသိုလ်မှဟာသောင်မတင်ဟောပြောပွဲအတွက်ဒေါက်တာနိုရာ Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, အဖြေဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားဆင်တူရိုးမှားကိုနားလည်ကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအမျိုးအစားအားလုံးကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်နိုင်သောအမှုလုပ် အပြုအမူ။
Volkow စိတ်ကူးအငြင်းပွားဖွယ်ကြောင်းအသိအမှတျပွုခွငျးအားဖွငျ့စတင်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာလူအတော်များများတို့ကပယ်ချခဲ့ကြောင်း concept တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါဟာ [စှဲ] လယ်ကွင်းသဘောကွဲလွဲခဲ့သညျ။ "
အဲဒါကိုစွဲတူသောပြုမူလူအများစုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတော်များများကျွမ်းကျင်သူများအနေနဲ့စွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်အစားအစာပယ်ချ - လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအစားအစာရှာကြံ။ ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ခြင်းတတ်, အစားအစာအက်ကွဲကိုကင်းကဲ့သို့မူးယစ်သကဲ့သို့စွဲလမ်းမဖွစျနိုငျသညျ။
ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ကဘာလဲ, သို့သော်, အက်ကွဲကင်းကိုယ်တိုင်ကလေ့ယုံကြည်သကဲ့သို့စွဲလမ်းမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ "သင်မူးယစ်ဆေးဝါးများယူသူတွေကိုကြည့်ရှုလျှင်, အများစုစွဲကြသည်မဟုတ်," Volkow ကဆိုသည်။ အမှန်စင်စစ်ပင်အက်ကွဲနှင့်ဘိန်းဖြူများကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးအဘို့, အသုံးပြုသူနည်းပါးလာထက် 20% စွဲဖြစ်လာသည်။
34 ကျော်လူကြီးများအချို့ 20% - - သင်လက်ရှိအဝလွန်နေသောလူများ၏အချိုးအစားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မတူဘဲ, တကသိသိသာသာပိုကြီးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဝလွန်နေသောသူတို့ကိုအတွက် Add နှင့်အမေရိကန်များ၏အပြည့်အဝသုံးပုံနှစ်ပုံကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးသူတို့ရဲ့အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သိသိသာသာအခက်အခဲများရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီဥစ်စာနှငျ့ကနျြးမာရေး-ဒီလောက်စွန့်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြုမူသောသူတို့၏အမျိုးအအချိုးအစားအားဖြင့်တိုင်းတာ, အစားအစာအမှန်တကယ်အက်ကွဲထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုပြီး "စွဲလမ်း" စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်: Häagen-Dazs vs. ဘိန်းဖြူ: အစားအသောက်စွဲလမ်းဟာဦးနှောက်အတွက်တူကဘာလဲ
Volkow နှစ်ဦးစလုံးအစားအသောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ကြောင်းအပျော်အပါးနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဦးနှောက်၏ဧရိယာများတွင်ဘုံအလုပ်မဖြစ်ဖော်ပြရန်သွားလေ၏။ ဤရွေ့ကားစနစ်များ neurotransmitter dopamine အပေါ်အားကိုး; အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, dopamine D2 receptors တွေရဲ့အရေအတွက်လျှော့ချဘုံဖြစ်ကြသည်။
Self-ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်, D2 receptors ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အားနည်းစွမ်းရည်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ အပျော်အပါးကို process တစ်ခုကိုဒေသများမှာတော့ receptors တစ်လျှော့ချရေးအစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးလျော့နည်းသွားခံစားနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ "သင် dopamine ထုတ်လုပ်ရန်မတိရိစ္ဆာန်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်" ဟု Volkow ကဆိုသည်။ "သူတို့ကငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၏သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကမစားပါဘူး။ ထိုသို့သကဲ့သို့သိသိသာသာပါပဲ။ "
မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ချိန်ကကြောင့်ဦးနှောက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ outsized အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ထူးခြားစွဲလမ်းဖြစ်ထင်ခဲ့ကြသည်: သူတို့အနည်းဆုံးဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလိင်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများကဲ့သို့သဘာဝအတှေ့အကွုံမြားထက်ဝေးပိုမိုမြင့်မား dopamine အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကဦးနှောက်ကိုထိန်းညှိဖို့တပ်ဆင်ထားတဲ့မဟုတ်ကြောင်းဓါတုဗေဒညီမျှမှုကိုဖန်တီးရန်ယုံကြည်သည်ခဲ့သည်။
အကယ်စင်စစ်လူသားမြားသညျပြောင်းလဲထားတဲ့အတွက်ပှဲ-or-အစာခေါင်းပါးသောအခါအခွအေနတစ်ခုကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဆနျ့ကငျြဘ - - အမှန်တကယ်ရှိစေခြင်းငှါသို့သော်များစွာသောခေတ်သစ်အစားအစာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဈေးပေါပေါတတ်နိုင်သမျှသကြားနဲ့အဆီကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအင်ဂျင်နီယာခဲ့ပဒေသာတစ်စကွဝဠာကြောင်းငြင်းခုန် အလားတူမညီမမျှဖန်တီးခဲ့သည်။
အမှတ်သရုပျဖျောဖို့, Volkow, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်မွတ်မပြေ၏လူသားမြားသညျ '' ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးသော့ချက်ကစားသမားဟော်မုန်း leptin အပေါ်သုတေသနပြုအကျဉ်းချုံး။ အဆီဆဲလ်များကဖြန့်ချိသော Leptin, ပုံမှန်အားဖြင့် leptin အဆင့်ဆင့်မြင့်သောအခါ, အစားအစာလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာ "။ အစာစားခြင်းရပ်တန့်, ကျနော်တို့အပြည့်အဝပါပဲ" ဦးနှောက်ကိုပြောပြခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်းသူငယ်ချင်းဟာ D2 receptors, ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုဟန်: leptin သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဝလွန်လူများ, သို့သော် "အလုံအလောက်ရဲ့။ ", ဟော်မုန်းမရှိတော့ထိထိရောက်ရောက်အချက်ပြနိုင်ကြောင်းကိုအဓိပ်ပာယျ, leptin ၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုဆုံးရှုံး
leptin လည်းပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတစ်အခန်းကဏ္ဍအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ "တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များတှငျကြှနျုပျတို့ leptin အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထူးပြုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကင်းကိုငါတို့သိကြ၏," Volkow ပြောတယ်။ "အဝလွန်ခြင်းခုနှစ်, leptin သည်းခံစိတ်ရှိပေမယ့် [လူသား] မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်စပ် leptin sensitivity ကိုပြောင်းလဲမှုများရှိပါတယ်မယျဆိုရငျမသိရပါဘူး။ "
နောက်ထပ်: အမေရိကန်တွေကျနော်တို့စဉ်းစားပါသန်း Fatter Be နိုင်ပါစေ, လေ့လာ Says
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားတစျခုမှာ key ကိုခြားနားချက်ကစားမှကြွလာသောအခါ, ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအစာအိမ်အပြည့်အဝသည်နှင့်နောက်တဖန်မစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အချက်ပြပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သွေးသကြားဓာတ်အနိမ့်များနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရှိမရှိအတွက်ကန်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ leptin ကဲ့သို့သောအချက်ပြဟော်မုန်းအချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိစေခြင်းငှါစဉ်သို့သော်မူးယစ်ဆေးနှင့်တကွ, ဖြစ်ခြင်း၏အဘယ်သူမျှမကအလားတူကိုယ်ထင်ရှားအချက်ပြမှုများရှိပါတယ် "အပြည့်အဝ။ "
အခြေခံအားဖြင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏စည်းမျဉ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ဒါက Anti-အဝလွန်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဤမျှလောက်များစွာသောဆုံးရှုံးမှုတှေရှိခဲ့တယျရှင်းပြကူညီလိမ့်မည်။ နှင့်အပြန်အလှန် - ဒါပေမယ့်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးများငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများအကြားတူညီကျနော်တို့အဝလွန်ခြင်းတိုက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ကလည်းအခြားအစှဲပွုမူဆကျဆံကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အငြင်းအခုန်အဆုံးသတ်၏လက္ခဏာမပြသထားတယ်-အစားအစာ-စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, တံဆိပ်သူ့ဟာသူအရေးကြီးပါသည်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုထိန်းညှိဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုအလွန်အမင်းနိုင်ငံရေးသဘောအငြင်းပွားမှုများနှင့်အတူ - အဘယ်အရာကိုအများဆုံးအရေးပါခေတ်သစ်ပတ်ဝန်းကျင်, အပြင်းအထန်ဆွဲဆောင်မှုအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးများတကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းလမ်းများရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။
Volkow ရဲ့ဟောပြောပွဲအတွက် PATH ဖောင်ဒေးရှင်းနယူးယောက်စီးတီးရှိတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူဦးနှောက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကကမကထပြုခံခဲ့ရပါတယ်နှင့်အောက်လွှတ်တော်အမတ် Jerrold Nadler (D-NY) ကအဖြစ်ဟောင်းဒီမိုကရက်တစ်နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဒါဝိဒ်ပက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (သူ့အရင်, ရီပတ်ဘလီကန်ဂျော့ခ်ျ Pataki ကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ )
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Volkow သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်စကားခုနှစ်, PATH Foundation မှဦးခေါင်းဒေါက်တာအဲရစ် Braverman အရေးယူဘို့လိုအပ်ကြောင်းအရေးပေါ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဘဝနှင့်အသက်ရှည်၏အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးခန့်မှန်းသူကပြောပါတယ်, လူတွေရဲ့အလောင်းတွေထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဆီပမာဏကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ - နှင့်ပိုပြီးပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
Maia Szalavitz TIME.com မှာကနျြးမာရေးစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ @maiasz မှာ Twitter ပေါ်တွင်သူမ၏ကိုရှာပါ။ သင်တို့သည်လည်း TIME အ Healthland ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်နှင့် @TIMEHealthland မှာ Twitter ပေါ်တွင်ဆွေးနွေးဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
Read more: http://healthland.time.com/2012/04/05/yes-food-can-be-addictive-says-the-director-of-the-national-institute-on-drug-abuse/# ixzz1rJIEixIY